मुलुक बृद्ध नेताहरुकै भरमा : के ६५ कटेका वृद्ध नेताबाटै मुलुकको भविष्य कोर्ने ? (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काठमाडौं, ७ मंसिर । एउटा निजामति कर्मचारीले ५८ वर्षपूरा गरेपछि अवकाश पाउँछ । तर, राज्यको नीति नियम बनाउने नेताहरुको उमेर हदबन्दी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यतिवेला अहम् प्रश्न बनेको छ । बेलाबखत नेतृत्व युवा पुस्तामा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहस पनि हुने गरेको छ । तर, ति बहसहरु निरर्थक छन् ।
किन भने नेपाली राजनीतिमा जरा गाडेर बसेका बृद्ध नेताहरुले सुन्नै चाहँदैनन् नत कुनै पनि राजनीतिक दलभित्रका युवा नेताहरुले पुस्तान्तरणको क्रान्ति गर्नैसक्छन् ।
विडम्बना, ति सबै युवा एउटा न एउटा वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल पार्न चाहन्छन् । त्यसैले पनि नेपालको भविष्य बृद्धकै हातमा झुण्डिएको छ ।
नेकपा विवाद चुलिएका बेला प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कात्तिक २२ गते एउटा अभिव्यक्ति दिए । उनले भनेका थिए।, ‘हामीले नेतृत्व छाडौं र युवा पुस्तालाई सत्ता हस्तान्तरण गरौं । ’
उनको यो अभिव्यक्ति युवालाई दिने गरी भने आएको होइन, यो त पार्टीभित्र आफ्ना विरुद्ध उत्रिएका अरु नेताहरुलाई उनले गरेको प्रहार हो । मनशाय जे होस् अब राजनीतिक नेतृत्व वृद्धबाट चल्दैन ।
यही मुद्दा अब सत्तारुढ नेकपाका युवा नेताहरुले उठाए पार्टी फुटबाट पनि बच्न सक्थ्यो, मुलुकको भविष्य पनि बन्ने आशा गर्न सकिन्थ्यो । युवामा सत्ता हस्तान्तरणको काम प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसमा पनि उत्तिकै आवश्यकता छ ।
केही प्रयास कांग्रेसका युवा नेताहरुले गरेपनि ति सबै निरर्थक बन्यो । कारण एक न एक वृद्ध नेताको फेरो समाएर आफ्नो राजनीतिक भविष्य उज्ज्वल देख्ने युवा नेताहरु आफ्ना वृद्ध नेतासँग नेतृत्व ‘देउ’ भन्ने सामथ्र्य राख्दैनन् ।
नेताको उमेर र नेतृत्व अवधि ?
यीनै नेताहरुको चंगुलमा नेपाली राजनीतिक घुमेको छ । यी बाहेक धेरै नेताहरु ६० कटेका छन् । उनीहरु नै नेपालको भविष्य कोर्न तम्तयार छन् । के यी बृद्धहरुबाट भोलिको नेपाल निर्धारण हुन्छ ?
किन युवाहरु नेतृत्वसम्म पुग्न सक्दैनन् ? यस्ता प्रश्नहरुको उत्तर अब युवा नेताहरुले दिनुपर्छ । होइन भने सबै दलका युवा नेताहरुले बृद्धलाई सम्मानपूर्वक विदा गर्न सक्नुपर्छ । उनीहरुको अनुभव र युवाको क्षमताले मात्र मुलुक बन्न सक्छ ।
कोरोना कहरले बजार नपाउँदा किसानको तरकारी बारीमै कुहिन थाल्यो